साहित्य Archives - Page5of 32 - Deshko News Deshko News साहित्य Archives - Page5of 32 - Deshko News
काठमाडौँ, असोज १३ लेखक सङ्घर्ष क्षेत्रीद्वारा लिखित प्रेमकथामा आधारित उपन्यास ‘साकुरा’ सार्वजनिक गरिएको छ । क्षेत्रीको सो पहिलो कृतिको आज राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का अध्यक्ष एवं साहित्यकार हरिहर अधिकारी
कहाँ छ्न् साल, सल्लो, खयर त्यहि सारेर प्रदेशको राजधानी पाँच वर्षसम्म सात पुस्ता पुग्ने सम्पपि कुम्ल्यार्इ । जनताका छोराछोरी हिजो पनि कार्यकर्ता थिए भोलि पनि कार्यकर्ता हुनेछ्न्। विकास विकासको नारा
मुक्तक कहिले उकाली कहिले ओराली झर्नुपर्छ। ज्यानको बाजी राखेर नै खोला तर्नुपर्छ।। जे–जे छन् सुबिधाहरु राजधानीमै होलान् मेरो सुदूरमा औषधि चामल नपाएर मर्नुपर्छ।।। ईश्वर कुँवर ‘साँफे’ अछाम हाल–धनगढी कैलाली
जब म बिहानै उठ्छु र पश्चिमतिर नजर लगाउँछु,त्यतिखेर उनी मलाई हेर्दै मुस्कुराइ रहेकी हुन्थी । कहिले हिमसिरक ओढेर हेरिरहेकी हुन्थी भने कहिले बादलुकोघुम्टो ओढी लजाउँदै दृष्टि फ्याकिरहेकी । लाग्छ वर्षौदेखि
बुटवल, असोज ६ बुटवलमा पहिलोपटक ५ नम्बर प्रदेशस्तरीय गजल प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । प्रदेश नं ५ का १२ वटा जिल्लाबाट सहभागी भएकामध्ये १० उत्कृष्ट गजलकारलाई वाचनका लागि शुक्रबार बुटवल
निर्दोषलाई न्याय दे
मुर्दाहरुको देशमा न्याय माग्दैछ्न् केही थान मानिसहरु !! चिच्याउदै छन् फेरि सुनेन भन्दै पुन चिच्याउदैछ्न् सडक तातेको छ तर, सदन चिसो छ अनि कहाँबाट जाग्छ्न् मुर्दाहरु र मानिसहरुलाइ न्याय दिन्छ्न्
विदुर(नुवाकोट), २९ भदौ नुवाकोटमा आगामी मङ्सिर १५ गते राष्ट्रिय कविता महोत्सव हुने भएको छ । नुवाकोट साहित्य प्रतिष्ठानका संस्थापक अध्यक्ष श्रीराम श्रेष्ठले प्रतियोगितामा पहिलो हुनेलाई रु ५० हजार, दोस्रो हुनेलाई
अमृका ताम्राकार नरोए आमा तीजमा छोरी आइनन् भनेर मायालु हातले पकाएको खाना खाइनन् भनेर आमाजु नन्द राताम्मे भए मलाइ कसैले सोधेनन् रातो साडी र चोलो लाइनन् भनेर बस्याछु सम्झी सँगिनीहरु
त्यति बेला ‘बा’ थिए, दिने कुनै उपहार थिएनन् ! अहिले उपहार थुप्रै छन्, तर लिईदिने ‘बा’ भएनन् !! चाहनाहरु थोरै थिए, जिउने बहाना धेरै थिए, हासों आशु सबै थिए, माया
बाकसमा सर्टिफिकेट्को जाम
मुक्तक कमाउन भन्दै बिदेशीनेको लाम लागेको छ। आफ्नो देश भन्दा खाडी नै काम लागेको छ।। भनसुन बिना पाइएन जागिर हजुर कतै पनि बाकसमा सर्टिफिकेट्को जाम लागेको छ।।